Kooxda Chelsea oo la xiriirtay Wakiillada Weeraryahan Robert Lewandowski si ay ugu soo dhaqaajiso Stamford Bridge – Gool FM
(London) 07 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa inay la xiriirtay Wakiillada Weeraryahanka naadiga Bayern Munich ee Robert Lewandowski si ay ugala hadasho suurto-galnimada uu xiddigu xagaagan ugu soo dhaqaaqayo garoonka Stamford Bridge.
The Blues ayaa suuqa kala iibsiga xiddigaha ka raadinaysa lambar sagaal cusub inkastoo ay bishii Janaayo ay kooxda Juventus ka soo qaateen Gonzalo Higuain.
Higuain ayaa intii lagu guda jiray heshiiska amaahda ah ee uu ku joogo galbeedka Magaalada London waxa uu dhaliyey saddex gool 11 kulan oo uu saftay, Chelsea ayeysanna u badnayn inay si joogto ah ula wada wareegto dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in kooxda ka dhisan Premier League ay raadinayso gooldhaliye cusub, waxaana ay doonaysaa inay ka soo qaadato horyaalka Bundesliga, Lewandowski iyo xiddiga Borussia Dortmund ee Alexander Isak oo isaguna diiradda u saaran.
Wadahadalladii hore ee u dhexeeyey Wakiillada Lewandowski iyo Chelsea ayaa la sheegayaa inay xumaadeen, laakiin Blues ayaa ku rajo weyn oo waddo kasta u maraysa sidii ay kula soo saxiixan lahaayeen Weeraryahankan lagu qiimeeyo 70 milyan oo gini, iyagoo la xiriiray wakiillada weeraryahankan.
Xiddiga xulka qaranka Poland ayaa labo gool dhaliyey kulankii xalay Bayern Munich ay 5-0 uga adkaatay kooxdiisii hore ee Borussia Dortmund, waxaana uu noqday ciyaaryayankii ugu horreeyey ee aan Jarmal u dhalan oo 200 oo gool ka dhaliya horyaalka Bundesliga.
Macallinkii hore ee kooxda Borussia Dortmund, Jurgen Klopp ayaa sidoo kale xiisaynaya inuu xiddigan Lewandowski u dhaqaajiyo Premier League si uu qeyb uga noqdo weerarka kooxda Liverpool.